UTORRENT: N'ỌDỤ ỤGBỌ MMIRI ADỊGHỊ EMEGHE (BUDATA DỊ) - UTORRENT - 2019
Mgbe ị na-ebudata faịlụ site na iji onye nwe obodo na-enye gị ohere, anyị nwere ike ịhụ akara ngosi ịdọ aka na-acha uhie uhie na ala aka nri ala na njirimara mmapụta. "Port adịghị emeghe (budata dịnụ)".
Anyị ga-agbalị ịghọta ihe mere nke a ji eme, ihe ọ na-emetụta nakwa ihe ị ga-eme.
E nwere ọtụtụ ihe kpatara ya.
Ihe mbụ kpatara ya bụ na kọmputa gị na-enweta njikọ site na NAT (onye na-ahụ maka ọrụ ya ma ọ bụ onye ntanetị). N'okwu a, ị nwere ihe akpọrọ "agba ntụ" ma ọ bụ adreesị IP dị omimi.
Ndozi nsogbu ahụ nwere ike ịzụta n'aka onye na-eweta ọrụ Ịntanetị "chacha" ma ọ bụ IP.
Onye na-egbochi mkpọchi ụgbọ mmiri
Nsogbu nke abuo nwere ike idina na ihe ndi ozo n'inye ohere nke Intanet. Onye na-enye ọrụ ahụ nwere ike igbochi ọdụ ụgbọ mmiri ndị ọrụ mmiri na-arụ ọrụ.
Nke a na-eme nnọọ obere ma edozi ya site n'ịkpọ ọrụ ndị ahịa.
Ihe nke atọ bụ na ị naghị emeghe ọdụ ụgbọ mmiri a chọrọ gị.
Iji mepee ọdụ ụgbọ mmiri ahụ, ịkwesịrị ịga na ntọala netwọk uTorrent, kpochie igbe ahụ "Ebe ọdụ ụgbọ mmiri na-arụ ọrụ" ma deba ọdụ ụgbọ mmiri dị na nso 20000 ruo 65535. Enwere ike igbochi ọdụ ụgbọ mmiri dị na ala ka onye belata iji belata ibu na netwọk.
Mgbe ahụ ịkwesịrị imeghe ọdụ ụgbọ mmiri a na router.
N'ikpeazụ, ihe nke anọ mere - ọdụ ụgbọ mmiri na-egbochi firewall (firewall). N'okwu a, chọọ ntụziaka na oghere ọdụ maka nchekwa gị.
Ka anyị lee ihe na-emetụta ọnụ ụzọ mechiri emechi ma ọ bụ n'èzí.
Ọdụ mmiri n'onwe ya adịghị emetụta ọsọ ahụ. Kama na-emetụta, ma ọ bụ n'ụzọ na-enweghị isi. Site n'ọdụ ụgbọ mmiri na-emeghe, onye ahịa gị nwere ike ijikọta ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị na-eso na netwọk iyi, ọ ka mma iji rụọ ọrụ na obere mkpụrụ nke mkpụrụ na akụ na nkesa.
Dịka ọmụmaatụ, na nkesa nke ndị ọgbọ ise na ọdụ ụgbọ mmiri emechiri maka njikọ abata. Ha enweghị ike ijikọta ibe ha, ọ bụ ezie na ha gosipụtara na onye ahịa ahụ.
Nke a bụ obere okwu banyere ọdụ ụgbọ mmiri na uTorrent. Site n'onwe ya, ozi a agaghị enyere aka dozie nsogbu ahụ, dịka ọmụmaatụ, japụ na ọsọ ọsọ ọsọ. Nsogbu niile dị na ntọala na ntọala ndị ọzọ, na ikekwe na njikọ Ịntanetị na-adịghị ike.